काठमाडौं, नेपालमा रहेका भगवान् दोर्जे शुग्देनका पूजाहल | Tsem Rinpoche
Mar 15, 2018 | Views: 259
संसारभरका आत्मीय मित्रहरू,
नेपाल मुलुक मलाई अति नै मनपर्ने ठाउँ हो । विगतमा मैले धेरै समय यस स्थानमा व्यतित गरिसकें र मलाई यहाँका पवित्र स्थानहरूका बारेमा राम्रो जानकारी छ । म मेरा मित्र र चेलाहरूलाई नेपाल राज्यमा धार्मिक भ्रमण गर्नका लागि सुझाव दिन चाहन्छु र म स्वयंले पनि मेरा धेरै चेलाहरूसँग काठमाडौंका पवित्र र शक्तिशाली पिठहरू भ्रमण गरेको छु ।
मैले प्रबज्या हासिल गरेको समयदेखि नै नेपालसँगको सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ । उहाँ पूजनीय दलाई लामाज्यूबाट प्रबज्या ग्रहण गरिसकेपछि म नेपालमा भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेको थिएँ । यही समय गादेन सार्त्से गुम्बामा लामो समयसम्म बसोबासका लागि अनुमति पाउन म कुरिरहेको थिएँ ।
त्यस समय म सामतेन लिंग गुम्बामा बसेको थिएँ जुन प्रसिद्ध बौद्धनाथ स्तूपा नजिकै अवस्थित थियो । यस स्तूपाभित्र बुद्धको अस्थिधातु रहेको विश्वास गरिन्छ । यही समयमा मैले केही गुरूहरूलाई पनि भेट्ने मौका प्राप्त गरें । सन् १९८७ को यस समयमा म करिब २ महिना यतै बसेको थिएँ र थुप्रै पवित्र स्थलहरूको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ । केही वर्ष पश्चात पुनः म मेरा मित्रहरूका साथ भ्रमण गर्न आएँ । यो भ्रमणका दौरान नेपालसँगको आत्मीय सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । अझै पनि नेपालसँगको माया न्यानो नै छ । सन्यासपछि हिमालयको काखमा रहेको सानो कुटीमा समय बिताउने ईच्छा रहेको छ । नेपालमा अवस्थित हिउँले ढाकेका हिमालयहरू, स-साना हरिया जंगलहरू र निला-निला तालहरू हेर्न पाउँदा मन भित्र असिमित आनन्द महशुस हुने गर्दछ । यो त्यही वातावरण हो जुन मेरो मनभित्र सजिएको छ मानौं कि यो मेरो आफ्नै घर नै हो । म जहाँ गएपनि यस्तै सुन्दर दृश्यहरू स्मरण गर्ने गर्दछु र दैनिक जीवनमा समाहित गर्ने प्रयास गर्दछु ।
दुई दशक अघि काठमाडौंस्थित स्वयम्भूमा छेम रिन्पोछे
नेपालका लामा मित्रहरूप्रति पनि म आभारी छुँ जसले मेरो नेपाल भ्रमणका दौरान काठमाडौं र काठमाडौं वरिपरि रहेका सुन्दर र पवित्र स्थानहरूको भ्रमण गराए । यस भ्रमणका दौरान नेपाली कला, संस्कृति, नेपाली जनजीवन र यस स्थानमा समाहित अमूर्त अध्यात्मप्रति भित्री हृदयदेखि श्रद्धा, गौरव, माया र आत्मीयपन अभिवृद्धि भएको थियो. । नेपाल मुलुक मात्र अध्यात्मले भरिएको होइन बरु यस मुलुकका बासिन्दाहरू पनि एकअर्काका संस्कृति र विश्वासमा सहिष्णुता दर्शाउँदछन् । मैले भ्रमण गरेका स्थलहरूमध्येमा यो पनि एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल हो र यस स्थानको तरंगले भित्री हृदयदेखि नै मलाई ओतप्रोत गर्दछ । कुनै दिन मलाई नेपालमा बसोबास गर्ने ईच्छा छ र हिमालको काखमा एउटा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने जुन ध्यान केन्द्रमा म मेरा चेलाहरूसँग समय बिताउन पाउँ र उहाँहरूसँगै गम्भीर किसिमको ध्यान अभ्यास गर्न सकूँ ।
नेपालसँगको मेरो व्यक्तिगत आत्मीय सम्बन्ध बाहेक पनि म नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति धेरै नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु किनकी उहाँहरूले मेरा तिब्बती मित्रहरूका लागि बस्नको सुरक्षित स्थान प्रदान गरिदिनुभयो जहाँ उनीहरूले भय र त्रासरहित वातावरणमा आफ्नो धर्म र संस्कृतिको अभ्यास गर्न पाए । यसर्थ नेपाली जनताहरूको प्रशंसामा म स्वयं पनि कुनै किसिमले आभार प्रकट गर्न चाहिरहेको छु । म स्वयं पनि एक दीक्षा प्राप्त भिक्षु हुँ, यसर्थ मैले गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान भनेकै मैले हासिल गरेको ज्ञान र धर्म नेपाली जनतासँग बाँड्नु हो ।. हाम्रो जीवन कहिलेकाँहि निकै नै कष्टमय र चुनौतिपूर्ण हुनसक्छ । यसर्थ म चाहन्छु कि नेपाली जनताहरूले आफ्नो जीवनमा आइपर्ने समस्यालाई सामना गर्ने कला सिकि जीवनलाई सुखमय बनाउन सकून् । यसका लागि भगवान् दोर्जे शुग्देनको अभ्यास निकै नै उपयुक्त छ ।
मेरा चेलाहरू र साथीहरूको सहयोगमा मैले काठमाडौंको व्यस्त क्षेत्रमा भगवान् दोर्जे शुग्देनको धर्म अभ्यास गर्ने दुईवटा पूजाघर निर्माण गरेको छु । भगवान् दोर्जे शुग्देन भगवान् श्री मञ्जुश्रीको अवतार हुनुहुन्छ, प्रज्ञाका ज्ञाता हुनुहुन्छ । नेपालको इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको उत्पत्ति र उहाँको सम्बन्ध महत्वपूर्ण रहेको छ ।
काठमाडौंको चाबहिलस्थित नवनिर्मित दोर्जे शुग्देन पूजाघर (शहरको केन्द्रबाट १५ मिनेट जति भित्र रहेको छ वा प्रसिद्ध बौद्ध क्षेत्रबाट १५ मिनेट जति भित्र छ ।)
कुनै समय काठमाडौं उपत्यका चारैतिर पहाडले घेरिएको र बीचमा पानी जमिएर तालको अवस्थामा रहेको विश्वास गरिन्छ । यस तालको बीचमा एउटा विशाल र प्रकाशमय कलमको फूल फुलिरहेको दृश्य मञ्जुश्रीले देख्नुभयो । यो कमलको फूल निकै नै विशिष्ट रहेको र भविष्यमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूको लागि लाभदायी हुनसक्ने तथ्य अवगत गर्नुभई भगवान् मञ्जुश्रीले आफ्नो खड्गको सहारामा पानी जाने नहर निर्माण गरि यो स्थानलाई बसोबास योग्य स्थान बनाउने निर्णय गर्नुभयो । यही ताल वर्तमान समयमा काठमाडौं उपत्यकाको रूपमा प्रसिद्ध छ । यसर्थ नेपालका हिन्दु धर्मावलम्बी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका जीवनसँग जसरी मञ्जुश्रीको महत्वपूर्ण योगदान जोडिएको छ,ठीक त्यहि तवरले भगवान् दोर्जे शुग्देनको अभ्यास उहाँहरूको लागि उपयुक्त रहेको र नेपालको जीवनशैलीसँग जोडिएको कुरामा म विश्वस्त छु ।
भगवान् दोर्जे शुग्देनको अभ्यासबाट हामीलाई विभिन्न प्रकारले लाभ मिल्ने गर्दछ, मुख्यतः धनप्राप्ति, सुख लाभ र सुरक्षाका साथै ज्ञान लाभ हुने गर्दछ । विधार्थी, व्यापारी, चिकित्सक, कृषक, पारिवारिक व्यक्ति, यात्री तथा भूतप्रेत आत्माबाट ग्रसित, मानसिक रोगी आदि व्यक्तिहरूका लागि उहाँको अभ्यास निकै नै लाभदायी सावित भएको छ ।(भगवान् दोर्जे शुग्देनको अभ्यासको बारेमा थप जानकारीको लागि यस बटनमा क्लिक गर्नुहोला ।)
हरेक पूजाघरमा किताब, ब्रोसर, कथा, पूजाका कार्डहरू तथा विभिन्न आकारका फ्रेमसहितका तस्विरहरू जस्तै भगवान् दोर्जे शुग्देनसँग सम्बन्धित वस्तुहरू यथेष्ट संख्यामा उपलब्ध छन् जुन निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ । मानिसहरूको सुविधाका लागि यी वस्तुहरू नेपाली, हिन्दी, तिब्बती, अँग्रेजी र चिनियाँ भाषाजस्ता विभिन्न भाषामा पनि उपलब्ध गराइएका छन् । तपाईंले घाँटीमा लगाउने निःशुल्क लकेटहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ (वा आफ्नो ब्याज तथा पर्समा पनि राख्न सक्नुहुन्छ), धूप र सिन्दुर पनि उपलब्ध छन् । साथै तपाईं स्वयंले पनि दियो, फलफूल, माला, खादा आदि पूजाका लागि ल्याउन सक्नुहुन्छ ।
हरेक पूजाघरमा विभिन्न भाषाहरूमा लेखिएका निःशुल्क वस्तुहरू उपलब्ध रहेका छन् ।
यस पूजाघरमा पाल्नुहुने भक्तजनहरूले विभिन्न प्रकारका भेंट चढाउनु भई शक्तिशाली धनेश्वर भगवान् दोर्जे शुग्देनसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ र पूजाआजा गरि प्राप्त भएको पुण्य जतिखेर तपाईंको जीवनमा आवश्यक परेको हुन्छ त्यस समयमा सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ । साथमा उहाँको मन्त्र ओम बेन्जा विकी विटाना स्वाहा जति सकिन्छ त्यति धेरै उच्चारण गर्नु पनि निकै नै लाभदायी सावित हुनेछ । तपाईंले समय मिलाउन सकेको खण्डमा उहाँको नाममा मैले लेखेको छोटो पूजामन्त्र पनि पाठ गर्न सक्नुहुन्छ ।
कुनै पनि सम्प्रदाय वा धर्मको व्यक्तिले भगवान् दोर्जे शुग्देनलाई पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, यसको लागि बौद्ध धर्म नै अपनाउनु पर्ने वा धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै किसिमको बाध्यता छैन ।. बौद्ध धर्मावलम्बी होस्, हिन्दु धर्मावलम्बी होस् वा अन्य कुनै धर्म अपनाउने व्यक्ति होस्, भगवान् दोर्जे शुग्देनले सबै भक्तजनलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । मात्र यही हो कि हाम्रो मन सफा हुनुपर्यो र हामीमा दया हुनुपर्यो । उहाँले हाम्रो विन्ति सुन्नुहुन्छ र हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ । पवित्र आत्मा र दैविक शक्तिले हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले कुन धर्म मान्छौँ भन्ने कुरासँग केही सरोकार हुँदैन । पवित्र आत्मा, दैविक शक्ति, बुद्धहरू हामी साधारण मानिसहरूको विचार र बाधाभन्दा धेरै अपार हुनुहुन्छ । उहाँहरू कुनै प्रकारको धर्मभन्दा पनि माथि र मुक्त हुनुहुन्छ, यसर्थ जब जब हामी जस्ता साधारण मानिसहरूले उहाँहरूलाई पुजा गरि सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गर्दछौँ तब तब उहाँहरूले हामीलाई उपकार गर्नुहुन्छ । यदि कसैले तपाईंलाई उहाँहरूको धर्म स्वीकार नगरेसम्म वा उहाँहरूको देवतालाई पूजा नगरेसम्म उहाँहरूको देवताले सहयोग गर्नुहुन्न भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको सिमित स्वार्थको लागि तपाईंलाई विचलित गरिरहेको सम्झनुपर्दछ किनकी देवताहरू वा देवत्व भनेको पूर्वाग्रह रहित, भेदभाव रहित, संकुचित मनोभाव नभएको तथा कसैलाई घृणा नगर्ने स्वभावका हुनुहुन्छ । यदि कसैले उहाँहरूको देवता, बुद्ध वा दैविक शक्तिले उहाँहरूको धर्म स्वीकार गरेपछि मात्रै सहयोग गर्दछ भनि धारणा राख्दछ भने किन त्यस प्रकारका संकुचित धारणा भएका देवताहरूको पूजा किन गर्ने ?
तपाईंलाई यदि कसैले एउटा धर्म अर्को धर्मभन्दा महान् छ वा भनौं उहाँहरूको धर्ममा नलागिकन तपाईंलाई सुरक्षा प्राप्त हुँदैन भन्छ भने त्यस्तो धर्म बुद्ध वा कुनै देवताले बनाएको होइन बरु केही त्यस्ता सिमित व्यक्तिहरू जसले हामीलाई डरको आडमा उनीहरूको वस वा शक्तिमा पार्न वा कुनै किसिमको स्वार्थ लाभ गर्न वा त्यस्तै धर्मगुरू बीचको अहम् भावनाका कारण त्यसरी भनिएको कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्दछ । यदि ती धर्मगुरूहरूले तपाईंलाई उहाँको धर्ममा आउनुपर्दछ वा तपाईंको धर्म निचस्तरको छ भन्छ भने उनीहरुले तपाईंको धर्म, संस्कृति, समुदायलाई अपहेलना गरेको सम्झनुपर्दछ । त्यतिमात्रै होइन सयौँ वर्षदेखि तपाईंको धर्मप्रति आस्था राख्दै आउनु भएका पूर्वजहरू र उहाँहरूले लाभ गरेका उपलब्धिमाथि नै प्रश्न गरेको सम्झनुपर्दछ । उनीहरूको अनुसार हाम्रा सम्पूर्ण पूर्वजहरू उनीहरूले बताएका धर्मको बाटोमा नलागेका कारण नर्कमा गएका हुन् त ? हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्म अपनाउने छुट्टै मौलिक पथ र संस्कार हुनुपर्दछ र कसैले पनि कसैको धर्ममाथि अपहेलना गर्न मिल्दैन । कसैले पनि कसैको आध्यात्मिक अभ्यासमाथि आलोचना गर्न मिल्दैन । हरेक धर्ममा आफ्नै प्रकारको लाभ हुने गर्दछ र कुन धर्म अपनाउने भन्ने कुरा कोही पनि मानिसको व्यक्तिगत हक अधिकार हो ।
साँच्चिकै धार्मिक मानिस त दयावान, करूणावान, समझदार तथा हरेक धर्मका मानिसहरूलाई माया गर्ने स्वभावका हुन्छन् । कुनै कुनै सम्प्रदायका धर्मगुरूहरूले उहाँहरूको धर्म पालना नगरेको खण्डमा नर्कमा जाने त्रास समेत पनि देखाउँछन् । यो कुरामा पनि अलिकति पनि सत्यता छैन । कति धर्महरू त त्यस्तै ५०० वा १००० वर्ष अघि मात्रै देखा परेका हुन् । ती धर्म उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिले मानिसहरू मरेपछि कता गए होलान् त ? मृत्युपछि हामी कता जान्छौं भन्ने कुरो त मानिसले कस्तो किसिमको कर्म गरे भन्ने कुरामा भर पर्दछ, त्यो व्यक्तिले कुन धर्म अपनाउँछ भन्ने कुरामा भर पर्दैन । नेपालका वासिन्दाहरू त सबै धर्मलाई आदरसत्कार गर्छन् र सबैका आ—आफ्नै किसिमको विकसित संस्कार रहेका छन् । यो संस्कारलाई आदर र संरक्षण गर्नुपर्दछ । दोर्जे शुग्देन आफै पनि भगवान् मञ्जुश्रीको अवतार हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई कुनै पनि धर्ममा परिवर्तन हुनको लागि निर्देशन गर्नुहुन्न । उहाँ करूणावान हुनुहुन्छ र सबैले उहाँलाई पूजा गर्न मिल्छ । दोर्जे शुग्देनले हामी सबैलाई समान रूपमा विना भेदभाव सहयोग गर्नुहुन्छ । हामीले कुन धर्म मान्छौँ, कुन जातको हौँ, महिला हौँ कि पुरूष, गरिव हौँ कि धनि, केही कुराले पनि उहाँलाई फरक पार्दैन । श्रद्धाका साथ म दोर्जे शुग्देनको रक्षामन्त्र, आशीर्वाद, अभ्यास तथा वंशजलाई नेपालमा विद्यमान आध्यात्मिकताको अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । भएका अभ्यासहरूलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले होइन । दोर्जे शुग्देनको अभ्यासबाट व्यक्तिगत रूपमा मलाई ठूलो लाभ प्राप्त भएको छ र त्यहि कुरा म तपाईंहरूसँग बाँड्न चाहन्छु । नेपालीहरू मात्र होइन सबै धर्मका सबै मानिसहरूले आफूले गर्दै आएका अभ्यासहरूसँगै दोर्जे शुग्देनको विशेष प्रकारको प्रार्थना वा मन्त्रलाई पनि जप्न सकिन्छ । मेरा पूजनीय गुरूवरले मलाई भलो गर्नका लागि ३० वर्ष अघि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास मलाई दिनुभयो र यो अभ्यासलाई अझ दिगो तथा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूसँग अभ्यास गरि म मेरा गुरूप्रति आदर प्रकट गर्न चाहन्छु । यो उहाँले मलाई दिनुभएको निर्देशन हो र उहाँलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि मैले अरूहरूसँग यो बाँड्नेछु । हामीले सबै धर्मप्रति आदर गर्ने र कसैको धर्मप्रति भेदभाव नगर्ने समय आएको छ । तपाईंको भलो होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु ।
मैले विगतमा थुप्रै मानिसहरूसँग भगवान् दोर्जे शुग्देनको अभ्यास बाँडेको छु र थुप्रै मानिसहरूले अद्भूत खालको सहयोग प्राप्त गरेको तथा विशेष प्रकारको संकेत पाएको कुरा बताएका छन् । उहाँहरू मध्ये धेरैजना आफूले प्राप्त गरेको दैविक सहयोगको स्मरणमा आभारीपूर्वक पूजाघरको सरसफाई गर्न, निःशुल्क वितरण गरिने वस्तुहरूको प्रकाशनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न तथा पूजाघरको अस्तित्वबारे प्रचारप्रसार गरि सचेतना फैलाउन सहयोग गर्नुभएको छ । यसर्थ जब तपाईं काठमाडौंमा पुग्नुहुन्छ, कृपया कुनै एउटा (वा दुईवटै) पूजाघर भ्रमण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईंले भगवान् दोर्जे शुग्देनसँग आत्मीय सम्बन्ध स्थापना गर्न खोज्नु भएको खबर सुन्न पाउँदा म धेरै धेरै नै प्रसन्न हुनेछु ।
सन् २००८ मा मेरा चेलाहरूसँगै म नेपालमा धर्मयात्रामा हिँडेको थिएँ । यो तस्विर पशुपतिनाथस्थित नरोपा र तिलोपाको गुफा बाहिर खिचिएको थियो । यस पवित्रस्थानमा म पूजा गर्दै थिएँ ।
दयालु तथा दानवीर दाताहरू, निकै नै मिहिनेती चेलाहरूलाई म धेरै धरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । साथमा विशेष धन्यवाद उहाँ महानुभावहरूलाई दिन चाहन्छु जसको सहयोग र साथ प्राप्त गरि काठमाडौंमा यी दुईवटा पूजाघर निर्माण कार्य सम्भव भयो । भित्रि हृदयदेखि म नेपाल सरकारको नियमकानुन प्रति आभारी हुन चाहन्छु जसले सबै प्रकारको धर्मलाई स्वीकारेको छ र विना कुनै भेदभाव श्रद्धा राख्न सिकाएको छ ।, नेपालका सम्माननीय रक्षामन्त्री भिमसेन दास प्रधानले यही कुरा काठमाडौंमा जनवरी ४—६ मा सम्पन्न दोर्जे शुग्देनका अनुयायीहरूको अन्तराष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा बताउनुभएको थियो ।
यी पूजाघरहरूलाई साकार स्वरूप दिनका लागि योजना, चन्दा संकलन, निर्माण, मर्मत तथा आयोजनामा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ र उहाँहरूप्रति पनि म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । बुद्धले बताउनुभएका करूणाका उपदेशहरू, दानको महत्व, स्वीकार गर्ने कला तथा प्रज्ञाको महानता अरूहरूसँग बाँड्न पाउँदा तथा दोर्जे शुग्देनको अभ्यास बताउन पाउँदा म जति हर्षित हुने गर्दछु त्यति हर्षित मलाई अरू कुनै विषयले पनि पार्न सक्दैन । दोर्जे शुग्देनको अभ्यासले मानिसहरूमा एक प्रकारको आशा जाग्ने गर्दछ र थुप्रै जीवन बचाउन सफल भएको छ । म यही कामना गर्न चाहन्छु कि सबै सहभागी व्यक्तिहरूको कल्याण होस् र धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले भगवान् मञ्जुश्रीले रक्षकको रूपमा धारण गर्नुभएको अवतारसँग साक्षात्कार गरून् । दोर्जे शुग्देनको यो अभ्यासले सफलता प्राप्त गरोस ता कि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले यसको लाभ लिन सकुन् । कृपया नेपालस्थित दोर्जे शुग्देनको पूजाघरसम्बन्धी थप जानकारी प्राप्त गर्नको लागि यो पोष्टमा नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहनु होला ।
सबैको मंगल होस्,
छेम रिन्पोछे ।
काठमाडौंस्थित पुतलीसडकमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघर
मैले सन् २०१६ मा काठमाडौंमा स्थापना गरेको भगवान् दोर्जे शुग्देनको यो पहिलो पूजाघर हो । अहिलेसम्ममा थुप्रै मानिसहरूले यस स्थानको भ्रमण गरि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास तथा प्रार्थना गरेका छन् र उहाँहरूको समस्याको समाधान पनि भएका छन् । यस स्थानको रक्षा गर्नुहुने महिलालाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँ निकै नै ठूलो सहायता सावित हुनुभएको छ । यस पूजाघरको भिडियो अवलोकन गर्नुहोला ।
डिल्लीबजार वडा नं. ५
काठमाडौंस्थित पुतलीसडकमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघरको स्थान । तस्विरलाई ठूलो पार्न क्लिक गर्नुहोला ।
काठमाडौंस्थित पुतलीसडकमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघरको बाहिरी दृश्य । यस स्थानका स्थानीय बासिन्दा दैनिक रूपमा पूजाघरको भ्रमण गरि पूजा गर्ने गरेको बताए ।
काठमाडौंस्थित पुतलीसडकमा रहेको पूजाघरमा भगवान् दोर्जे शुग्देनको नवनिर्मित ३ फिट अग्लो मूर्ति । यी पूजाघरको लागि धेरै मानिसले हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् । स्थानीय ढाँचासँग मिल्ने गरि यी पूजाघरहरूको संरचना निर्माण गरिएका छन् ता कि यी पूजाघरप्रति उहाँहरूको आत्मीयपन विकास होस् । स्थानीय वासिन्दाले प्रशंसाका साथ स्वीकारेका छन् ।
मञ्जुश्रीको अवतारका रूपमा रहेका दर्शनीय दोर्जे शुग्देनको मूर्तिको नजिकबाट तस्विर ।
नेपाली भाषा र हिन्दी भाषामा दोर्जे शुग्देनको सामाग्री (एउटा बुकलेट, ब्रोसर, लकेट, ८आर को प्रार्थना कार्ड र ५आर को प्रार्थना कार्ड) निःशुल्क रूपमा उपलब्ध रहेका छन् ।
दोर्जे शुग्देनको सामाग्री अँग्रेजी भाषामा पनि निःशुल्क उपलब्ध रहेका छन् ।
काठमाडौंस्थित चाबहिलमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघर
अनुशीर्षक: सन् २०१८ मा स्थापित चाबहिलस्थित भगवान् दोर्जे शुग्देनको यो पूजाघर काठमाडौंभरिकै एकदमै भिड हुने स्थानहरूमध्येमा एक रहेको छ जुन दृश्य माथिको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । हजारौं मानिसहरू प्रत्येक दिन पूजाघर हुँदै आहोरदोहोर गर्दछन् । थुप्रै मानिसहरूले भगवान् दोर्जे शुग्देनको अभ्यासको बारेमा थाहा पाउनु मेरो लागि निकै नै हर्षको कुरा हो ।
चाबहिल वडा नं. ७
काठमाडौंस्थित चाबहिलमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघर भएको स्थान । ठूलो पार्नको लागि तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस् ।
काठमाडौंस्थित चावहिलमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघरको बाहिरी भाग
चाबहिलको निकै नै भिड हुने स्थानमा दोर्जे शुग्देनको यो पूजाघर रहेको छ । दैनिक रूपमा हजारौं मानिसहरू यो पूजाघर हुँदै ओहोरदोहोर गर्दछन् ।
चाबहिलमा रहेको दोर्जे शुग्देनको पूजाघरको बाहिरी दृश्य
दोर्जे शुग्देनको आशीर्वाद प्राप्त गरि नेपालका सबै दाजुभाईहरू सुखीपूर्वक रहून् ।
अलौकिक दोर्जे शुग्देनको मूर्तिको नजिकैबाट एक झलक
हिन्दी भाषामा उपलब्ध दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
तिब्बती भाषामा उपलब्ध दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
नेपाली भाषामा उपलब्ध दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
चिनियाँ भाषामा उपलब्ध दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
अँग्रेजी भाषामा उपलब्ध दोर्जे शुग्दनेको सामाग्री र मानिसहरूले घरमा लान मिल्ने गरि फ्रेम गरिएको तस्विर
तमिल भाषामा उपलब्ध दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
मानिसहरूले घरमा लान मिल्ने गरि फ्रेम गरिएको दोर्जे शुग्देनको तस्विर
चावहिलस्थित दोर्जे शुग्देनको पूजाघरमा देखिने सडकको दृश्य
१. विधार्थीहरुको लागि
विद्यालयमा राम्रो गर्न चाहने, उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने, ज्ञान हासिल गर्न विवेक बढाउने जसले भविष्यमा राम्रो काम खोजी अाफ्नो परिवार, गाउँ, शहर र देशको भलो गर्ने विधार्थीहरुले भगवान दोर्जे शुग्देनलाई भरोसा गर्न सक्छन्। उहाँको मन्त्र दैनिक रूपमा जपेमा ज्ञान, स्पष्टता र राम्रो स्मृति प्राप्त गर्न सकिन्छ।
२. चिकित्सकहरुका लागि
चिकित्सकहरु यस्ता व्याक्ति हुन्। जसले मानव शरीरबाट पिडा र शरिरिक समस्याहरु हटाउँछन्। जब कुनैपनी पृष्ठभुमिका चिकित्सकहरुले भगवान दोर्जे शुग्देनको प्रार्थना र मन्त्र दैनिक रूपमा जपेमा, चिकित्सको क्षमता अझ वृद्धि हुन्छ। यसका साथै, भगवान दोर्जे शुग्देनको शक्तिशाली मन्त्रले बिरामीको शरीरभित्र चिकित्सक मार्फत प्रवेश गरी उनीहरुलाई पुर्णरुपमा निको पार्न मद्दत गर्छ। त्यसैले चिकित्सकहरुको लागि यो एउटा उत्कृष्ट मन्त्र हो। जसले बिरामीहरुलाई निको पार्न मद्दत गर्दछ।
३. व्यापारीहरुको लागि
जो व्यक्ति जसले निजी व्यापारको क्रममा धन आर्जन गरी आफ्नो परिवारको हेरविचार, जिम्मेवारीका लागी धेरै दिशा निर्देशन, दलहरुबाट थुप्रै समस्याहरु मुठभेड गरेको हुन सक्छ। त्यसैले जब एक निष्कपट व्यापारी पुर्णरूपमा भगवान दोर्जे शुग्देनलाई फूल, धूप, चिया र बत्ती चढाई दैनिक रूपमा दोर्जे शुग्देनको मन्त्र जप गरेमा, उसले राम्रो स्थान हासिल गरी आफ्नो परिवारको हेरविचार, आवश्यकता पूरा गरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
४. परिवारको लागि
परिवारमा समस्या, बेसदभाव, अबुझ तथा तर्कहरु हुन्छन् जसका कारण कहिलेकाहीँ परिवार बिछोड हुन सक्छ र जब परिवारमा बेसदभाव र समस्याहरु हुन्छन्, तब बालबच्चा, अभिभावक तथा वृद्घहरुलाई मर्का पर्न जान्छ। परिवारमा थप सदभाव र शान्ति छाउनको लागि परिवारका सबै सदस्यहरु एक आपसमा बसि ईमानदारीपुर्वक, आदरपुर्वक विषयबस्तुहरुको छलफल गर्नुपर्छ। दोर्जे शुग्देनको दैनिक पाठपूजा गरेमा, परिवारमा अझ बढी सदभाव र शान्ति छाउने छ।
५. किसानहरुको लागि
किसानहरु जमिन र अाफुले फलाएको अन्नबालीमा विश्वास गर्छन्। उनीहरुको गर्मी याममा कडा परिश्रम हुन्छ। कहिलेकाहीँ हिलोमा गोरुसंग रोपईका लागी बर्षा र घामको प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। अनन्त हिउँदयामको लागी, किसानहरूले उब्जाएका ती अन्न ऐश्वर्या भित्र्याउछन्। जब किसानहरूको अन्नबाली उब्जाउ वा उब्जेको अन्नबाली विभिन्न कारणले नाश हुन्छन्, तब किसानहरू एकदम समस्यामा पर्दछ।
त्यसैले किसान र किसानी परिवारले आफ्नो घरमा भगवान दोर्जे शुग्देनको स्थापना गरी प्रार्थना गरेमा राम्रो हुनेछ। उब्जनीको लागी सधैं भगवान दोर्जे शुग्देनलाई जल, फुल, धुप र बत्ती चढाई दैनिक प्रार्थना गर्नु राम्रो हो। र राम्रो खेतीका लागि किसानी परिवारहरु भगवान दोर्जे शुग्देन माथि विश्वास र भरोसा गर्न सकिन्छ।
६. असाधारण पीडितहरु लागी
कोही व्यक्तिहरु अरुको सफलतामा ईष्र्या गर्छन्। कोही व्यक्तिहरु रिस, तर्क, असहमति तथा अन्य कारणहरुले अरुसंग खुसी हुदैनन्। यसको नतिजा स्वरुप, कहिलेकाहीँ कुनै मानिसहरुले टुनामुना, जादू, मन्त्र र अनुष्ठान द्वारा अरुलाई हानी र चोट पुर्याउन शक्तिशाली मानिसहरुसंग सम्पर्क गर्न सक्छन्। कुनै व्यक्ति जादुमा विश्वास गर्छन् भने, कुनै व्यक्ति गर्दैनन् तर विश्वास गरे पनि नगरे पनि, जादु टोना अझै पनि छ र कहिलेकाहीँ यसले हानी पनि पुर्याउनु सक्छ।
दोर्जे शुग्देनलाई दैनिक लगातार प्रार्थना गरेमा, समयको क्रमसँगै जादु टोनाबाट मुक्ति र साथै ईष्र्यालु दलहरुको जादु टोनाबाट क्षति हुन बाट सुरक्षीत हुन सकिन्छ। भगवान दोर्जे शुग्देनले कुनै दलहरूलाई क्षति पुर्याउनु हुन्न तर हामीलाई सुरक्षा दिनु हुन्छ।
७. आत्मा द्वारा परेशान भएकोहरुका लागि
निश्चित गल्लि, बाटो, उपत्यका, जंगल तथा मसानघाटहरुमा शक्तिशाली प्रेत आत्माहरुको बाँस हुनसक्छ। प्रेत आत्मा ती हुन जो मृत्युु पछी हलचल गर्न सक्दैनन् र पुर्नजन्म लिन सक्दैनन् र उनीहरु दुखी, उदास र समर्पित क्षेत्रमा रहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्ता आत्माहरुले अरुलाई दुःख दिन्छन्, तर्साउछन्, रोग आदि सृजना गर्छन् र समस्या खडा गर्छन्।
यस्ता आत्माहरुलाई मुक्ति दिनु पर्छ। हामी तिनीहरुबाट डराउनु हुदैन र हामीले उनीहरु प्रति महान करुणा देखाउनु पर्छ। भगवान दोर्जे शुग्देनका मन्त्र जप द्वारा यस्ता आत्माहरु प्रति महान करुणा देखाएर र सृजना गरेर ति आत्माहरुलाई मुक्त गर्न सकिन्छ र उनीहरुले हामीलाई थप दु:ख दिन सक्दैनन्।
८. मानसिक चिन्ताद्वारा पीडितहरु लागी
मानसिक चिन्ता दिमागको त्यो अवस्था हो जसमा हामी निराशा र दु:ख अनुभुति गर्छौ। हामी त्याग्न चाहान्छौ, हामी संघर्ष गर्न चाहन्नौ र हामी हाम्रो भित्रि शक्ति गुमाउँछौ। हामी जीवनको एक पछी अर्को समयमा हामी मान्सिक चिन्ताबाट पीडित हुन्छौं। यो निको हुन सजिलो छैन। कहिलेकाहीँ यो चिकित्सकीय (नैदानिक) कहिलेकाहीँ मानसिक वा कहिलेकाहीँ गलत तरिकाको सोचाई हुन्छ। यदि यो चिकित्सकीय भएमा हामीले पेशाकर्मीबाट सहायता लिनै पर्छ। तर यदि यो अस्वस्थ शरीर वा अस्पष्ट दिमाग गलत दृष्टिकोणबाट उत्पन्न अन्य प्रकारको मानसिक पिडा भएमा भगवान दोर्जे शुग्देनको मन्त्रको जपले हाम्रो मानसिक पिडाबाट निको हुन र सहयोग गर्न सक्छ वा पिडाबाट मुक्त हुने सहायता पत्ता लगाउन सहयोग गर्छ। मानसिक पिडामा यो महत्त्वपूर्ण छ कि वेचैनहरुबाट मुक्त हुन भगवानसंग मात्र भर पर्नु हुदैन, तर सहि समयमा सहयोग पनि खोज्नुपर्छ।
९. सुरक्षाको आवस्यकता भएकाहरुको लागि:
समय अनुसार हामीले इच्छा नहुदा पनि खतरायुक्त, टाढा, अपराध र प्राकृतिक प्रकोपयुक्त विभिन्न स्थानहरुमा यात्रा गर्नु पर्ने हुन्छ। यी स्थानहरुमा यात्रा गर्न हामी अत्यन्त होशियार हुनुपर्छ। यदि हामीलाई केहि भएमा हाम्रा परिवारलाई पिडा हुन्छ। यात्रा अघि वा यात्रा अवधिमा पूजा गरेर, मन्साउनी चढाएर र भगवान दोर्जे शुग्देनको प्रार्थना र मन्त्र जाप गरेर हामी सुरक्षित हुन सक्छौ।
मञ्जुश्रीले जस्तै भगवान् दोर्जे शुग्देनले पनि प्रज्ञारूपी खड्ग आफ्नो दाँया हातमा समात्नु हुन्छ । यो खड्गले हाम्रा समस्या, कठिनाइ तथा नकारात्मक कर्मलाई काट्नुका साथै पवित्र गर्दछ ता कि हामीले चाहेका ईच्छाहरू पुरा गर्न सकुन् । यो शस्त्रमा धारलाई नियतवश नै आक्रामक स्वरूप दिइएको छ ता कि धेरै भन्दा धेरै प्रभाव पार्न सकून् । भगवान् दोर्जे शुग्देनको हातमा रहेको यस अस्त्रले उहाँको अभ्यास शुद्धताको लागि, विघ्नबाधा हटाउनका लागि तथा पुण्य लाभको लागि, आध्यात्मिक प्राप्तिको लागि र निर्वाण लाभको लागि कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा दर्शाउँदछ ।
दोर्जे शुग्देनलाई छोटो प्रार्थना:
यो दैनिक दोर्जे शुग्देनलाई प्रार्थना, २५ औ छेम रिम्पोछे द्वारा विहिबार, २६ फरबरी २०१५ बिहान २:०३ मा रचना गर्नु भएको हो।
स्वर्गमा अनगिन्ती देवत्वहरु छन। ती सबै देवत्वहरुले सबै प्राणीहरुको फाइदाका लागि विभिन्न पक्षहरु देखाएको छ। दैवका रूपकाय स्वरूपमा दया, कुशल माध्यम र बुद्धि विवेक छन्। हामी हाम्रो अदुरदर्शिताको कारणले मात्र हाम्रा भावनाको सम्पुर्ण श्रृङखलाको दौरान हामी निरन्तर खुशी, दुखी, निच भएको, हराएको, भरिपुर्ण, दोधार र रित्तो महशुस भएको समयमा उनीहरूलाई आह्वान गर्दछौं।
महान बुद्धिजीवी दोर्जे शुग्देन, हाम्रो स्वभावलाई विचार गर्दै आमाबुबाको एक मात्र बालकको रुपमा लिनुहोस्।
जब कठिनाई, समस्या र दुविधाहरु सृजना हुन्छ तब म लगायत मेरा सम्पुर्ण परिवार, प्रियजनहरु, वातावरण र मेरा पाल्तु जनावरलाई पनि आशिष दिन अनुरोध का साथै, म मा बुद्धि आओस, आश पलाओस र शान्ति प्राप्त गर्न सकुन्।
ओ गुंबाददार गोलो टोपी, भिक्षुको त्रिबस्त्र धारक, स्वतन्त्रता, न्याय र बुद्धिमत्ताको घोतक तरवार वाह्क र इच्छापुरक गहना धारक, सबै नकारात्मकको दमनको प्रतीक महान सिंहमा विराजमान अलौकिन भगवान दोर्जे शुग्देनलाई मेरो ईच्छाहरु पूरा गर्न अनुरोध गर्दछु। मलाई थाहा छ कि मेरा ईच्छाहरु उत्कृष्ट नहोला, त्येसैले परिणामको लागि म तपाईंको बौद्धिकताको चरणमा समर्पण गर्दछु। यद्यापी यो मैले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। दया गरेर मलाई लगायत सम्पुर्ण प्राणीहरुलाई आशिष दिनुहोस् कि हामी स्वतन्त्रताको महान शहरमा प्रवेश गर्न सकुन्।
महान भगवान दोर्जे शुग्देन, तपाईं मेरो जीवनको अंश बन्नुहोस भनि आत्मैदेखि विनम्र पुकार गर्दछु। र मेरो घरलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र मलाई बुद्धि, सहायता र सुख दिनुहोस् ता कि म अरुको लागि विना सुचिको सेवक बन्न सकु र म अरुमा केन्द्रीत हुदै अाफ्नो र मेरा सबै प्रियजनहरुको समस्या मेटाउन सकुन्।
म दयालु, बुद्धिमान, विवेकशील, सहिष्णु र मलाई चोट पुर्याउने र माया गर्नेहरुलाई झन क्षमा दिन सक्ने बन्नको लागि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईं, दोर्जे शुग्देन सामू सामिप हुन हामी सबै समर्पण गर्दछौं। हामीले स्थिर दृश्य, प्रक्षेपण र कठोरतालाई परित्याग गर्नुपर्छ। अाखिरी मा, जब म यो अस्तित्वको जहाजलाई त्यागेर अाफ्ना् सबै चिज र सबै जना पछी छाडिने छु तब मैले गरेको सकारात्मक कार्य मात्र महत्त्व राख्द छ। मलाई अहिले यसको अनुभूति र कार्य गर्न दिनुहोस्। यस महत्त्वपूर्ण क्षणमा, हे शक्तिशाली र दयालु दोर्जे शुग्देन, मलाई तपाईंको एक दृष्टि गराई, कृपया मलाई पनि तपाईं संगै लैजानुहोस्। जहाँ ज्ञान लिई मेरो अध्यात्मिक मौन यात्रा जारी राख्न सकु।
मेरो प्रार्थना पूरा गर्न र सिद्धि प्राप्त गर्न म तपाईंलाई केसर रंगिन चिया चढाउने छु। तपाईंको मन्त्र जपेर प्रेम, शान्ति, लामो जीवन, सुरक्षा र शुन्यताको उत्कृष्ट दृश्य उत्पन्न होस्।
सन्तुष्टि, शान्ति र बुद्धिमत्ताको मन्त्र:
ॐ बेन्जा विकि बिटाना स्वाहाः
प्रत्येक दिन एक माला पुरा वा बढी पटक जप्नु राम्रो हुन्छ। प्रत्येक/हरेक बर्ष १,००,००० वा बढी पटक साधना हुने ठाँउमा सहभागी हुनुसकेमा उत्तम हुनेछ।
निःशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्ने
दोर्जे शुग्देनको उपन्यासहरू
तल दिइएका कुनै पनि लिंकमा क्लिक गर्नुभई आफूलाई चाहिएको फाइल डाउनलोड गर्न सकिनेछ:
नेपाली भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको उपन्यास – नेपाली
अंग्रेजी भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको उपन्यास
तिब्बेतियन भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको उपन्यास
चिनियाँ भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको उपन्यास
प्रिन्ट गर्न सकिने सामाग्रीहरू
तल दिइएको कुनै पनि लिंकमा क्लिक गर्नुभई आफूलाई चाहिने फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्:
नेपाली भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
अंग्रेजी भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
तिब्बेतियन भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
चिनियाँ भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
हिन्दी भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
तामिल भाषामा रहेको दोर्जे शुग्देनको सामाग्री
भगवान् दोर्जे शुग्देनको राम्रो आकारका निःशुल्क पोष्टरहरू
तल दिइएका कुनै लिंकमा क्लिक गर्नुभई आफूलाई उपयुक्त लाग्ने दोर्जे शुग्देनको राम्रो आकारको पोष्टर डाउनलोड गर्नुहोस्:
नेपाली भाषामा दोर्जे शुग्देनको तस्विर
अंग्रेजी भाषामा दोर्जे शुग्देनको तस्विर
तिब्बेतियन भाषामा दोर्जे शुग्देनको तस्विर
हिन्दी भाषामा दोर्जे शुग्देनको तस्विर
तामिल भाषामा दोर्जे शुग्देनको तस्विर
सबै भाषामा दोर्जे शुग्देनको तस्विर
बुद्धहरूको राम्रो आकारका तस्विरहरू निःशुल्क डाउनलोड गर्नका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्: https://www.tsemrinpoche.com/?p=62528
Tags: Buddhism, chapels, dorje shugden, kathmandu, nepal, practice
« Digital Journal Publishes Tsem Rinpoche's Advice Against Self Immolation
Prominent Bentong Figures in the Pre-WWII Era »